Salman Khan Oo Ranbir Kapoor Eey Ku Tilmaamay Kadib Markuu Sawirada Katrina Kaif Baraha Bulshada Ku Faafiyay!! – Filimside.net
Salman Khan Oo Ranbir Kapoor Eey Ku Tilmaamay Kadib Markuu Sawirada Katrina Kaif Baraha Bulshada Ku Faafiyay!!
Salman Khan waa mid kamid ah atoorayaasha qalbiga jilcan ee Bollywoodka kujiraan cafintiisa wey badantahay balse inuu ilaawo qalad laga galay amaa uu tirsanaayo wey yartahay oo si fudud kuma ilaawo xitaa si fudud qofka kuma cafiyo.
Katrina Kaif wuu iska cafiyay kadib markii ay Ranbir Kapoor ka raacday balse wali Ranbir ma uusan cafin oo wuu u xanaaqsanyahay sida marwalba laga dareemo wareysiyada uu Ranbir Kapoor kaga hadlo.
Waxaan dib u milicsanay hada kahor markii Salman Khan uu eey ku tilmaamay jilaaga caanka ah Ranbir Kapoor taaso sii hurisay colaada labadan jilaa balse Sallu hab kaftan ah ayuu Ranbir ku galay waxayna sheekadan dhacday Salman markii ugu horeysay ee uu ka qeyb galaayey barnaamijka Koffe With Karan.
Waxaana ka dambeyay arinkaas Filmsameye Karan Johar xiligaas waxay ahed xili Ranbir saaxiib la ahaa Katrina Salman-na maseer dhexda kaga jiray waxuu isku dayaayey inuu difaaco Katrina si walba ay kaga tagtay isagoo saaxiibtinimo u muujiyay.
Karan ayaa Salman weydiyay inuu jilayaasha Bollywoodka mid kamid ah ku tilmaamo eeyga yar (Puppy) durbana Sallu waxuu soo magac qaaday Ranbir Kapoor isagoo hab kaftan ah sheekada u dhigaayey waxuu yiri,”Ranbir ayaan Puppy dhihi lahaa (Eey yar).”
Sheekada intaas kuma ekaanin Karan ayaa sii weydiyay suaal kale waxuu yiri,”sawir qaadayaasha dhib badana sawiro qasab ah ayee kaa qadanayaan tusaale sawirada Katrina Kaif laga qaaday ee Internet-ka lagu faafiyay kawaran.”
Salman waxuu ku jawaabay,”Sawir qaadayasha sawiradee Katrina ka faafiyeen waxaa ka daran kuwa Ranbir Kapoor faafiyay kuwaas ma arkin miyaa mana aqaan dantiisa balse sawiro daliix oo munaasib ahen ayuu gabadh ka faafinayaa.”
Karan ayaa weydiyay Salman atooraha uu jecelyahay Bollywoodk inuu iska foodeyo lana kaftamo waqtigaan waxuu Sallu ku jawabay,”Ranbir Kapoor ayaan iska jeclahay inaan foodeyo oona la kaftamo.”
Sheekada oodhan kaftan ayuu ku bilaaway kuna dhameeyay balse si sarbeeb ah ayuu Ranbir ku weeraray Sallu xiligaas taaso kaliftay colaada labadan atoore inee sii fogaato ilaa maantana ma ahan kuwa isku fiican.